Haharitra hafiriana ny iPad Pro vao handoa vola tanteraka? | Vaovao IPhone
Haharitra hafiriana ny iPad Pro vao handoa vola tanteraka?
Vaovao IPad | | iPad Pro, About us
Ny iPad Pro vaovao dia efa teo amin'ny mpampiasa nandritra ny roa andro. Miaraka amin'ny processeur A9X, RAM 4GB ary hakitroky pixel tsy mampino iPad Pro dia mitazona ny androm-piainany noho ireo modely rehetra nialoha azy, izay tokony ho tamin'ny 10 ora. Ny iPad Pro dia miaraka amina charger 12 W na eo aza ny bateria manana capacité avo kokoa noho ny iray tampo aminy. Ny fiampangana ny iPad dia iray amin'ireo lahasa izay terena ataontsika mandrakariva amin'ny alina noho ny habetsaky ny fotoana ilaina amin'ny fiampangana tanteraka.
Araka ny angon-drakitra nomen'ny ArsTechnica, izay nanery ny fitaovana hatramin'ny farany ambony, Ny faharetan'ny fiampangana feno ny iPad Pro dia afaka mitondra antsika eo anelanelan'ny adiny efatra sy efatra sy sasany, raha mbola tsy ampiasainay ilay fitaovana, satria mety ho lava kokoa aza ny fiampangana. Amin'ny voalohany dia maharitra adiny efatra na mahery ny olana, raha tsy hoe andoavantsika izany amin'ny alina, fa ny olana dia tonga rehefa tsy dia mandeha amin'ny bateria intsony isika ary mila maka izany na amin'ny seranam-piaramanidina na amin'ny efitranon'ny hotely. afaka manohy mampiasa azy io hatrany.
Miaraka amin'ity angon-drakitra ity, hahafahana mameno ny ampahefatry ny bateria ilantsika adiny iray farafahakeliny, tsy mampiasa azy io ary manala ny fifandraisana rehetra amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny maody fiaramanidina. Araka ny iFixit, Ny bateria iPad Pro dia 3,77 v miaraka amin'ny 10,307 mAh raha ny maodely kely teo aloha kosa dia mampiditra batterie 7.340 mAh miaraka amn'ny voltage 3,76 v. Ny zava-misy mahaliana momba ity iPad Pro ity dia ny halavan'ny tariby izay ampidirin'i Apple miaraka amin'ilay fitaovana, mitovy amin'ilay omena amin'ny Apple Watch fa somary fohy kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Haharitra hafiriana ny iPad Pro vao handoa vola tanteraka?
Ny rindrambaiko sy lalao havaozina ho an'ny iPad Pro dia aseho ao amin'ny App Store
Ny Bluetooth manaraka dia ho haingana kokoa ary hanana faritra maro kokoa